कसरी घटाउने मोटोपना ? – Health Post Nepal
कसरी घटाउने मोटोपना ?
२०७८ भदौ २ गते ११:३९
आधुनिक जीवनशैलीमा मोटोपन आमसमस्या बनिरहेको छ । मुख्यतः शारीरिक काम नहुनु, खानपानको अस्वस्थकर शैलीजस्ता कारणले मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको छ । मोटोपनमा शरीर मात्र नभएर त्यसभित्रका हरेक अंग मोटो हुन्छन् । पछिल्लो समय विश्वभर नै मोटोपनका रोगी दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।
नेपालमा कुल जनंसख्याको ५–६ प्रतिशत मानिसमा मोटोपन रहेको अनुमान छ । तर, मानिसमा मोटोपन कसरी चिन्ने, मोटोपनको मापदण्ड के हो ? यसलाई कसरी निर्धारण गर्ने ? यी विषयमा जान्नु जरुरी छ ।
माटोपनलाई निर्धारण गर्न बडी–माक्स इन्डेक्स (बिएमआई) विधि अपनाउन सकिन्छ । मानिसको किलोग्राममा नापिएको तौललाई मिटरमा नापिएको उचाइको स्क्वायरले भाग गर्दा निस्कने प्रतिफललाई बडी–माक्स इन्डेक्स भनिन्छ । उदाहरणका लागि, कुनै मानिसको तौल १०० केजी र उचाई १ मिटर ६० सेन्टिमिटर छ भने उसको बिएमआई १००÷(१.६×१.६) बराबर ३९.०६ हुन आउँछ । साधारणतया महिला तथा पुरुष दुवैका लागि बिएमआई २५ भन्दा कम हुनुपर्छ । बिएमआई २५ देखि ३० सम्म भएमा अधिक तौल मानिन्छ भने ३० भन्दा बढी भएको अवस्थालाई मोटोपनको सिकार भएको भन्न सकिन्छ ।
मोटोपन भएका व्यक्तिमा विभिन्न रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । मोटोपन भएका धेरैजसो मानिसमा उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता समस्या हुन्छन् । मोटोपन भएका मानिसलाई मुटुरोग लाग्ने सम्भावना बढी हुने तथ्यांकले देखाएका छन् । ३० भन्दा बढी बिएमआई भएका बिरामीले तौल नघटाएको खण्डमा स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ । हाम्रै अनुभवमा बिएमआई ५५ भएको मोटोपनको बिरामी भेटिएको छ, जसको तौल २ सय केजीभन्दा बढी थियो ।
मोटोपनका कारण विभिन्न हुन्छन् । त्यसमध्ये एउटा वंशानुगत पनि हो । यातायताको सुविधाका कारण हाम्रो जीवनशैली परिवर्तित भएको छ, यसले पनि मानिसमा शारीरिक व्यायाम कम हुँदा मोटोपन बढिरहेको छ । त्यस्तै, जंकफुडको सेवनले पनि मोटोपन बढिरहेको छ ।
मोटोपनलाई हामी रोग भनेर चिन्दछौँ । मोटोपनका कारण मधुमेह, हदृयाघात, मस्तिष्काघात, उच्च रक्तचाप हुने तथा फोक्सो र मुटुका रोग बढ्ने हुन्छन् ।
मोटोपन भएका २० प्रतिशत मानिसमा डिप्रेसन, १५ प्रतिशतमा डायबेटिज, १० प्रतिशतमा क्यान्सर, ३० प्रतिशतमा मस्तिष्काघात, ५० प्रतिशतमा उच्च रक्तचाप पाइएको छ ।
मोटोपनको उपचारका विभिन्न पद्धति अभ्यासमा छन् । यसमध्ये खानपानमा नियन्त्रण र शारीरिक व्यायाम प्रमुख हुन् । मोटोपनका बिरामीले खानपानमा क्यालोरी बढाउने, परिमाण घटाउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सुरुमा प्रत्येक दिन ३० मिनेटबाट शारीरिक व्यायाम सुरु गरी बिस्तारै बढाउँदै लैजानुपर्छ । बिरामीलाई क्यालोरी धेरै वहन गराउने र थोरै डाइट दिने गरिन्छ । यसले पनि भएन भने कही औषधिको प्रयोग गरिन्छ ।
खानपानमा नियन्त्रण, शारीरिक व्यायाम र औषधिको सेवन गर्दा कम्तीमा १० प्रतिशतसम्म तौल घटाउन सहयोग मिल्छ । शारीरिक व्यायाम गर्दा तर औषधिको सेवन नगर्दा पुनः मोटोपन हुन सुरु हुने गर्छ । त्यसकारण पनि दीर्घकालीन उपचार भनेको बेरियाट्रिक सर्जरी हो ।
मोटोपनका बिरामीको आन्द्रामा अप्रेसन गरिन्छ, जुन दूरवीनकोे सहयोगले गरिन्छ । यसबाट मोटोपनको ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म तौल कम हुन्छ । विश्वमा ७० लाख मानिसमा मोटोपन समस्याका रूपमा रहेको तथ्यांक छ । सबैभन्दा बढी चुरोट सेवनका कारणले मानिसको मुत्यु भएको छ भने दोस्रोमा मुत्युको कारण मोटोपन बनेको छ । मोटोपनका कारण सुगर भएको छ भने अप्रेसनपश्चात् ८० प्रतिशत मानिसले सुगरको औषधि खानुपर्दैैन । त्यसैगरी, मोटोपनका कारण उच्च रक्तचाप भएका ७० प्रतिशतले अप्रेसनपश्चात् औषधि खानुपर्दैन ।